इन्स्टाग्राम कथाहरू टेम्प्लेट | अनलाइन क्रिएटिभहरू
इन्स्टाग्राम कथाहरू टेम्प्लेट
एनकर्नी आर्कोया | 28/03/2022 19:33 | प्रेरणा
इन्स्टाग्राम यो सिर्जना भएदेखि सबैभन्दा बढ्दो सामाजिक सञ्जालहरू मध्ये एक हो। सुरुमा, यो केवल युवाहरूले मात्र प्रयोग गर्थे, तर सानो-सानो कम्पनीहरू आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न प्रवेश गर्दै छन्। र त्यो जहाँ, ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा, तपाईं भित्र आउनुहुनेछ। के हुन्छ यदि कम्पनीले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा छवि अभियान डिजाइन गर्न सोध्छ? तपाईंले तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई परिचय गराउनु पर्छ, तर यदि तपाईंले इन्स्टाग्राम कथाहरू टेम्प्लेटको साथ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ?
यसबाट तपाईले उसलाई राम्रो प्रस्तुति दिनुहुनेछ र उसलाई त्यो छवि वास्तवमा उसको प्रोफाइलमा कस्तो देखिन्छ भनेर देखाउनुहुनेछ। त्यसोभए हामी तपाईंलाई केहि इन्स्टाग्राम कथा टेम्प्लेटहरू देखाउने बारे कसरी?
1 इन्स्टाग्राम कथाहरू के हुन्
2 किन इन्स्टाग्राम कथाहरू प्रयोग गर्ने?
3 इन्स्टाग्राम कथा टेम्प्लेट
3.1 इन्स्टाग्राम कथा टेम्प्लेट
3.2 साइबर सोमबारको लागि टेम्प्लेट
3.3 इन्स्टाग्राम कथा टेम्प्लेट
3.5 इन्स्टाग्राम स्टोरी टेम्प्लेटहरू
3.6 विज्ञापन टेम्प्लेटहरू
3.7 संयुक्त कथा र पोस्ट
3.8 इन्स्टाग्राम कथाहरू प्याक
इन्स्टाग्राम कथाहरू के हुन्
जब इन्स्टाग्राम सुरु भयो, तपाईले गर्नु पर्ने थियो एउटा छवि र केहि पाठ अपलोड गर्नुहोस्। अरू केहि हैन। वास्तवमा, उनले त्यो भन्दा बढी अनुमति दिएनन्। तर, समयसँगै, सुविधाहरूको एक श्रृंखला थपियो जसले अन्ततः धेरै मानिसहरूलाई यो सामाजिक सञ्जाल रोज्न बाध्य तुल्यायो।
ती प्रकाशनहरू मध्ये एक इन्स्टाग्राम कथाहरू हो। उनीहरु के गर्छन्? जब खातामा कथा हुन्छ, प्रोफाइल तस्विर निलो किनारमा बेरिएको हुन्छ। जब तपाइँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, एउटा ठाडो प्रकाशन देखा पर्दछ जुन केहि सेकेन्ड मात्र रहन्छ, तर तपाइँ लिङ्कसँग लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, इमोटिकनहरू, वाक्यांशहरू, सन्देशहरू, आदि राख्न सक्नुहुन्छ।
एक गतिशील र अन्तरक्रियात्मक सामग्री भएकोले, यसले धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछ र धेरै कम्पनीहरूले अझै पनि यसलाई 100% प्रयोग गर्दैनन्। गर्नेहरू सधैं आफ्ना अभियानहरूको लागि डिजाइनरहरूको खोजीमा हुन्छन्, ताकि उनीहरूले आफ्ना दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सकून्।
किन इन्स्टाग्राम कथाहरू प्रयोग गर्ने?
धेरैले इन्स्टाग्राम कथाहरू प्रयोग गर्दैनन्, र अझै तिनीहरू कम्पनीहरूको लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छन्। र यो हो कि, इन्स्टाग्राममा, तपाइँ लेखहरू राख्न सक्नुहुन्न। लिङ्कहरू प्रोफाइलमा मात्र काम गर्दछ र लगातार लिङ्क परिवर्तन गर्न असम्भव छ।
त्यसपछि के गर्ने? सजिलो, कथाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। कम्पनीहरूले आफ्ना लेखका तयार गरिएका तस्बिरहरू अपलोड गर्न सक्छन् र प्रोफाइलको अतिरिक्त, उनीहरूले उनीहरूसँग कथाहरू अपलोड गर्न सक्छन् र यसरी प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस लेखलाई खोजी नगरी पहुँच गर्न सजिलो बनाउन तिनीहरूलाई लिङ्क गर्न सक्छन्।
तसर्थ, तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरू पनि प्रयोग गरिँदैन (जुन मेटाले धेरै मन पराउँदैन) र तथ्याङ्कहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।
इन्स्टाग्राम कथा टेम्प्लेट
के तपाईलाई माथिको याद छ? तिनीहरूको अभियानको लागि डिजाइनरहरू? ठिक छ, जहाँ तपाइँ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाइँका प्रस्तावहरू ग्राहकहरूलाई देखाउन रोचक हुन सक्छ, यसलाई इन्स्टाग्राम कथाहरू टेम्प्लेटको साथ गर्नुहोस्। यो एक डिजाइन हो जसले सामाजिक सञ्जाल अनुकरण गर्दछ र यसलाई थप यथार्थवादी बनाउँछ।
त्यसकारण, यहाँ केहि विचारहरू छन् जुन तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी एउटा टेम्प्लेटको साथ सुरु गर्न जाँदैछौं जसले तपाईंलाई आफ्नो डिजाइनहरू सिर्जना गर्न धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। कुलमा त्यहाँ लगभग 20 टेम्प्लेटहरू छन् जुन कपडा पसलहरू वा सामान्य रूपमा उत्पादनहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तिनीहरूको फाइदा यो हो कि तिनीहरू छविहरू र पाठ दुवैको लागि धेरै ठाउँ छोड्छन्।
तपाईंले यसलाई फेला पार्नुहोस् यहाँ.
साइबर सोमबारको लागि टेम्प्लेट
तपाईलाई थाहा छ, धेरै पसलहरूले अब ब्ल्याक फ्राइडे, साइबर सोमबारको लागि प्रचारहरू सञ्चालन गर्छन्... खैर, यो केस त्यो अन्तिम मिति र फेसन र सामान क्षेत्रको लागि केन्द्रित छ।
अब, यो त्यो मितिको लागि मात्र उपयोगी छैन, तर अरू धेरैका लागि, तपाईंले यसलाई सम्पादन गर्नुपर्छ र यसलाई आफ्नो मनपर्ने अनुकूलन गर्नुपर्छ। तपाईंले 10 टेम्प्लेटहरू फेला पार्नुहुनेछ, ती सबै PSD।
तपाईंसँग यो छ यहाँ.
वास्तवमा यो एउटै होइन तर ती मध्ये धेरैको प्याक हो। विशाल बहुमत कालो र सेतो, वा सेतो कालो र सुनको हुनेछ। तपाईं फोटो र पाठ राख्न सक्नुहुन्छ। र यद्यपि तिनीहरू फेसनको लागि मात्र विज्ञापन गरिएका छन्, सत्य यो हो कि तपाइँ तिनीहरूलाई अन्य क्षेत्रहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो PSD सम्पादन गर्ने र तपाइँलाई के चाहिन्छ परिवर्तन गर्ने कुरा हो।
यस अवस्थामा हामी एउटा पृष्ठ लुकाउन जाँदैछौं जहाँ तपाइँ इन्स्टाग्राम कथाहरूको लागि नि: शुल्क टेम्प्लेटहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। सत्य यो हो कि तपाईसँग छनौट गर्न धेरै छ, र विभिन्न क्षेत्रहरूबाट।
तपाईले मात्र हेर्नु पर्छ यहाँ.
इन्स्टाग्राम स्टोरी टेम्प्लेटहरू
यी विज्ञापन अभियानहरूमा केन्द्रित छन्, र सत्य यो हो कि यो नराम्रो विचार होइन, किनकि धेरैले तपाईंलाई त्यही कारणको लागि भाडामा लिन सक्छन्। त्यसोभए केहि विवरणहरू र परिवर्तनहरूसँग तपाईंले धेरै आकर्षक डिजाइनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरू तपाईंसँग PSD र AI दुवैमा आउनेछन् ताकि तपाईंले छवि सम्पादन कार्यक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्छ।
तपाईंसँग छ यहाँ.
यस अवस्थामा, यो 30 इन्स्टाग्राम कथाहरू भएको प्याक हो, दुबै व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि।
तिनीहरूसँग सफा तर एकै समयमा सुरुचिपूर्ण डिजाइन छ र तिनीहरूलाई उत्सुक लुक दिन विभिन्न तत्वहरू प्रयोग गर्नुहोस्। थप रूपमा, यसले भन्छ, तिनीहरूमा5विशेष र न्यूनतम डिजाइनहरू समावेश छन्।
संयुक्त कथा र पोस्ट
के तपाइँ तपाइँको प्रोफाइल मा प्रकाशन र कथाहरु मा एक समान वा कम्तिमा सम्बन्धित भएको चाहानुहुन्छ? ब्लगबाट लेखहरू बेच्न वा प्रवर्द्धन गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि हामीले तपाईंलाई पहिले भनेका कुराहरूको लागि यो राम्रो विचार हुन सक्छ र यसलाई थप पहुँचयोग्य बनाउन कथाहरूमा लिङ्क छोड्नुपर्छ।
यस अवस्थामा तपाईंसँग कुनै पनि क्षेत्रको लागि एक मोनोक्रोम र कालो र सेतो रंग प्यालेटको डिजाइन हुनेछ।
कुलमा तपाईंसँग 40 फाइलहरू हुनेछन्, 10 पोष्टहरूको लागि र 10 कथाहरूको लागि।
तपाईंले तिनीहरूलाई फेला पार्नुहोस् यहाँ.
इन्स्टाग्राम कथाहरू प्याक
यो सबैभन्दा ठूलो प्याकेजहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले भेट्नुहुनेछ किनभने यसमा 135 इन्स्टाग्राम कथा टेम्प्लेटहरू छन्। मैले ब्यानरहरू राखे पनि, चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने तिनीहरू कथाहरूको लागि आकार जस्तो देखिन्छ।
यहाँ तपाईंले यति धेरै विविधता पाउनुहुनेछ कि तिनीहरू कुनै पनि प्रकारको कम्पनीको लागि उपयुक्त हुनेछन् र यसरी तपाईंले एउटै डिजाइनका विभिन्न दर्शनहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंले आफूलाई सबैभन्दा मनपर्नेहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले बुझ्नुहुन्छ यहाँ.
निस्सन्देह, तपाइँ तपाइँको आफ्नै डिजाइनहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी केहि पूर्ण रूपमा मौलिक बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईं समय बचत गर्न चाहनुहुन्छ र धेरै छिटो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यी विकल्पहरू उहाँलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई मनपर्छ कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, वा पहिले नै डिजाइन गरिएको आधार बनाएर तिनीहरूलाई अनुकूलन गर्नुहोस्।
के तपाइँ इन्स्टाग्राम कथाहरू टेम्प्लेट बनाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » इन्स्टाग्राम कथाहरू टेम्प्लेट
म कसरी इन्स्टाग्रामको लागि GIF बनाउन सक्छु
80 को विज्ञापन